Waa maxay 3D Blu-ray? Iibso 3D Blu ray Movies Online
> Resource > DVD > Waa maxay 3D Blu-ray? Halkee Blu-Ray 3D Movies?
Waa maxay 3D Blu-ray?
3D Blu-ray waa qaab filim cusub qeexitaanka sare bilowday Blu-ray cajalid Association (BDA) . 3D filimada Blu-ray waa hore la heli karaa horaanta 2010, siisa waayo-aragnimada filim cajiib ah ee tiyaatarka iyo guriga. 3D Blu-ray jir ahaan waa isku mid dhammaan kale disc Blu-ray, laakiin kala duwan macquul ah. 3D Blu-ray waxay ku salaysan tahay qaab audio / video Blu-ray hadda, laakiin waxa uu la kordhiyay si ay u bixiyaan video 3D iyo waxyaabaha bedeley 3D.
Tan iyo 3D Blu-ray waa macquul ka duwan guud Blu-ray, ciyaartoyda Blu-ray jir ah oo aan ka ciyaari kara ee 3D movie cusub Blu-ray. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay drive ah Blu-ray in ay awood u 2x ama dhaqso u akhri xawaare, aad u cusboonaynta karaa oo keliya marka software ciyaaryahan si aad u hesho 3D Blu-ray shaqeeyay on your computer.
3D Blu-ray bixisaa cajiib ah oo xiiso leh naqshadeynta waayo-aragnimo ah oo ku saabsan menu 3D iyo Cinwaan taas ayaa laga yaabaa sidoo kale u dhaw ama fog ka daawadayaasha.
Shuqulladiisa sameeya 3D Blu-ray Sidee?
Indhihii na arkaan adduunka 3D ay dabiicadda ay sabab u tahay meesha uu ka yara duwan ee indhaha. Tani waxay noqon kartaa sababta aan laba indhood halkii ay ka mid leedahay. Iyada oo ku saleysan hab this, filimada 3D loo abuuray, iyo habab badan oo kala duwan, laakiinse wax waa isku mid, oo waxay ka wareejiyo images kala duwan si ay indhaha iyo bidix midig. Ugu weyn ee nidaamka video 3D waa Anaglyphic 3D, kala qaybinta 3D iyo jir ah isku xig xiga 3D.
Anaglyphic 3D casaan / muraayadaha cyan u isticmaalaan in ay shaandhayso (saarto) qayb ka mid ah qaybaha kala midabka muuqda ka Sawirka loogu tala galay indhaha kasta si ay u curiyaan images kala duwan. Kala qaybinta 3D ka dhigaysa isticmaalka sifo kale iftiinka - jihada. Koob oo kala fog yihiin labada filtarrada kala qaybinta kala duwan, taas oo kaliya ogolaan jihada mid ka mid ah iftiin si maray, oo la odhan jiray "linearly kala fog" iftiin. The koob 3D isku xig xiga jir ah gacanta ku emitter ah, taas oo sheegayaa koob oo ah in la furo ama ku dhow in aynu iftiinka ayaa sidaas noqotay in ay curiyaan image kala duwan ee indhahayaga. Kuwani glassed waxaa loogu yeero "koob shutter".
Waxaad garan karaa 3D Blu-ray ka 3D DVD disc ka baxsan. Waxay leeyihiin baaxadda isku mid u eg. Movies 3D kara badbaadi si disc ah DVD ama disc Blu-ray, si loo yaqaan 3D DVD 3D Blu-ray ama. Ogsoonow in 3D DVD waa qeexid caadiga ah, halka 3D Blu-ray waa qeexid sare.
3D Blu-ray ciyaari karo 3D DVD (ma HD DVD), laakiin 3D DVD MA ciyaari karo 3D Blu-ray. Qaar ka mid ah ciyaartoyda ciyaari kara labada 3D Blu-ray iyo 3D HD DVD. Tixraac buuga wixii faahfaahin ah ka hor inta aadan iibsan filimada 3D. Laakiin in ciyaaryahan ka ciyaari karaan disc ah macnaheedu ma aha in aad u daawatid la koob 3D asalka. Haddii aad ka daawan kartaa filim 3D on disc ama ma waxay ku xiran tahay koob 3D saxda ah ee shaashadda bandhigay.
Shuruudaha 3D Blu-ray
Hoos waxaa ku qoran shuruudaha nidaamka asaasiga ah inuu u ciyaaro filimada Blu-ray on TV. Hubi in aad wax walba si ay u bilaabaan ciyaaro 3D filimada Blu-ray aad HDTV.
* HDTV 3D (la koob 3D)
* 3D Blu ray-ciyaaryahan
* Filimada 3D Blu-ray (fiiri hoos)
Haddii aad PC xidhmi doontaa HDTV, halkan shuruudaha computer inuu u ciyaaro 3D filimada Blu-ray ah.
Processor (processor) : Pentium 4 541 (3.2 GHz), Athlon 64 X2 3800+, AMD qeybo E-taxane & C-taxane ah ama ka sarreeya.
Graphics processor (GPU on Card) : Intel G45, ATI Radeon HD 2400, NVIDIA GeForce 8800GT ama ka sare.
Blu-ray Player Software : DAPlayer (Free) iyo Cyberlink PowerDVD waxaa lagula talinayaa
Blu-ray 3D Movie List iyo meesha laga gato
Movies Kuwaas waxaa laga iibsan karaa in 3D qaab Blu-ray. Hubi haddii filimada aad jeceshahay in in la sii daayo 3D qaab Blu-ray oo lagugula talinayaa in aad ka iibsan on Amazon.com. Markaasay bilaabi safarka 3D ee aad masraxa guriga.
Tafaariiqda Release Date
Piratfisken 3D January 11, 2011
Ma aragteen 3D: The Cutubka Final January 25, 2011
Megamind Aan ku qabsada
Yogi Bear March 22, 2011
Xafiday March 29, 2011
Gulliver ee u safreysa April 19, 2011
Xoonkii Green May 3, 2011
Taariikhda Narnia: The safarkan ee ku tunta, Dawn ah Aan ku qabsada
Drive careysan May 31, 2011
Sanctum June 7, 2011
Alice in Ihmemaa December 7, 2010
Avatar February 2012
Cats & Dogs: aarta ee Kitty u ifaaya, November 16, 2010
Kulanka dhaxeeya kooxo ka November 16, 2010
Daruur la Fursada ah doofar June 22, 2010
Arrimaha Didabadda Me December 14, 2010
Disney ee A Christmas Carol November 16, 2010
Sida loo tabobaro in aad Dragon Aan ku qabsada
Ice Age: Dawn of Dinosaurs ah Aan ku qabsada
Legend waalid: The gorayo of Ga'Hoole December 17, 2010
Bahal House September 14, 2010
Wuxuush vs. Shisheeyaha Aan ku qabsada
My dhiig 3D Valentine October 5, 2010
Season Open (film) November 16, 2010
Xumaan Resident: nolosha danbe December 28, 2010
Shrek / Shrek 2 / Shrek Saddexaad / Shrek ah oo weligiis ah Aan ku qabsada
Tallaabada Up 3D December 21, 2010
Airbender Dambe November 16, 2010
Polar Express ayaa (film) November 16, 2010